Guri: Macalimiinta Norway, xor bey u yihiin inay ardeyda tusaan sawirada laga sameeyo nabi Muxamed. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Guri: Macalimiinta Norway, xor bey u yihiin inay ardeyda tusaan sawirada laga...
Maalintii jimcaha aheyd waxaa dalka Faransiiska lagu dilay nin macalin ahaa oo ardeyda fasalkiisa tusiyay sawiro farshaxan ah oo loo ekeysiiyay nabi Muxamed NNKH. Waxaana dilkiisa ka danbeeyay wiil 18-jir jeejniyaan ah oo markii danbe ay toogashu ku dileen booliska dalka Faransiiska.
Macalinka ayaa marka uu sawirada tusinayay ardeyda fasalkiisa ka hadlayay casharo la xiriira xoriyada hadalka, wuxuuna tusaale usoo qaadanayay sawirada laga sameeyo nabiga. Isaga oo ardeyda muslimiinta aheyd ka codsaday inay banaanka uga baxaan fasalka.
Sidoo kale ciidamada sirdoonka iyo booliska dalka Faransiiska ayaa xabsiga dhigay ilaa 18 qof oo lala xiriirinayo inay taageersanyihiin ururada xagjiriinta ah. Waxeyna bilaabeen howlgalo ka dhan kooxaga lala xiriirinayo inay taageero u hayaan ururada xagjirka.
Magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska iyo guud ahaan ka dhacay mudaaharaadyo taageero loogu muujinayo macalinkaas la dilay, waxaana falkaas canbaareeyay qeybo badan oo kamid ah madaxda dowladaha Yurub.
Norway: Macalamiintu Xor bey u yihiin.
Wasiiradda waxbarashada dalkan Norway, ahna gudoomiyaha xisbiga Venstre, Guri Melby ayaa iyada oo ka hadleyso falkaas macalinka lagu dilay, sheegtay in macalinkaas oo qabanayay shaqo muhiim ah, uuna ardeydiisa barayay ka qeybqaadashada dimuqraadiyada iyo adeegsiga xoriyada hadalka. Waxeyna sheegtay in arintaas darteed loo dilay ay tahay mid laga cabsado, aadna u foolxun.
Wasiiradda oo hadalkeeda sii wada ayaa sheegtay in macalimiinta dhiga iskuulada Norway ay xor u yihiin inay tusaale ahaan usoo qaataan sawirada farshaxanada ah ee laga sameeyay nabi Muxamed (NNKH), hadii ay iyagu markaas u arkaan inay qeyb ka noqon karto casharka ay bixinayaan.
Guri Melby ayaa sheegtay in barashada xoriyada hadalka iyo xuquuqul insaanku ay qeyb ka tahay manhajka waxbarashada dalka Norway. Sidaas darteed ay macalimiintu ay xor u yihiin inay adeegsadaan sawirada laga sameeyay nabiga, hadii u arkaan inuu markaas waaqici ahey. Waxeyna raacisay inay ku kalsoontahay fahanka aqooneed ee macalimiinta Norway.
Guud ahaan dalalka Yurub, waxaa ka socoto hadalheynta falkaas uu geystay 18-jirka ka xanaaqsanaa sawirada laga sameeyay nabiga.
Xigasho/kilde: Kunnskapsministeren seier norske lærarar står fritt til å vise Muhammed-karikaturar.
Previous articleBarafkii oo gobolada qaarkood ka bilowday. Booliska oo baabuurleyda u digayo.
Next articleTrondheim: Nin baabuur ku dilay taksiile soomaali ah oo xabsi iyo magdhow lagu xukumay.